ထိုင်း​၀န်​ကြီး​ချုပ်​ဟောင်း ​အ​ဘီ​ဆစ် ၀ိ​ချာ​ဂျီဝ​ကို ​ဘန်​ကောက်​ရာ​ဇ၀တ်​ဆိုင်​ရာ ​တ​ရား​ရုံး​က ​လူ​သတ်​မှု​နဲ့ ​ဒီ​နေ့ ​တ​ရား​စွဲ​လိုက်​ပြီး ​အာ​မ​ခံ​နဲ့ ​ပြန်​လွှတ်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်။
၂၀၁၀ ​ခု​နှစ် ​ဆ​န္ဒ​ပြ​မှု​တွေ​ကို ​နှိမ်​နင်း​ရာ​မှာ ​လူ​ဒါ​ဇင်​နဲ့​ချီ ​သေ​ဆုံး​ခဲ့ ​အ​မှု​နဲ့ ​ပတ်​သက်​လို့ ​တ​ရား​စွဲ​ခံ​ရ​တာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
​ဒီ​အ​မှု​ဟာ ​အ​ဘီ​ဆစ် ​ဦး​ဆောင်​တဲ့ ​အ​တိုက်​အ​ခံ​ပါ​တီ​က ​ကျော​ထောက်​နောက်​ခံ ​ပေး​ထား​တဲ့ ​ဆ​န္ဒ​ပြ​သ​မား​တွေ​က ​လက်​ရှိ ၀န်​ကြီး​ချုပ်​ယင်း​လပ်​ကို ​ရာ​ထူး​က​နေ ​နုတ်​ထွက်​ပေး​ဖို့ ​တောင်း​ဆို​နေ​ချိန်​နဲ့ ​တိုက်​ဆိုင်​နေ​ပါ​တယ်။
​အ​ဘီ​ဆစ်​က​တော့ ​စွပ်​စွဲ​ချက်​တွေ​ကို ​ငြင်း​ဆန်​လိုက်​ပြီး ​ဒါ​ဟာ ​နိုင်​ငံ​ရေး​သ​ဘော​ပါ​တဲ့ ​စွပ်​စွဲ​ချက် ​ဖြစ်​တယ်​လို့ ​ပြော​ပါ​တယ်။ ​မီ​ဒီ​ယာ​တွေ​ကို​တော့ ​တွေ့​ဆုံ ​ဖြေ​ကြား​ခြင်း ​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး​။
​အ​ဘီ​ဆစ်​ကို ​ဘတ်​ငွေ ၁ ​ဒဿ​မ ၈ ​သန်း ​အာ​မ​ခံ​နဲ့ ​ပြန်​လွှတ်​လိုက်​တယ်​လို့ ​သူ့ေ​ရှ့​နေ​က ​ပြော​ပါ​တယ်။
​လက်​ရှိ ၀န်​ကြီး​ချုပ် ​ယင်း​လပ်​ကို ​အ​စိုး​ရ ​ဆန့်​ကျင်​တဲ့ ​ဆ​န္ဒ​ပြ​သ​မား​တွေ​က ​ရာ​ထူး​က​နေ ​နုတ်​ထွက်​ပေး​ဖို့ ​တောင်း​ဆို​နေ​ပါ​တယ်။
​အ​ခု ​နောက်​ဆုံး ​နိုင်​ငံ​ရေး ​ထိပ်​တိုက်​တွေ့​မှု​တွေ​မှာ ​စစ်​တပ်​က ​ပါဝင်​ပတ်​သက်​ခြင်း ​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး​။
​ထိုင်း​စစ်​တပ်​ဟာ ​လွန်​ခဲ့​တဲ့ ​နှစ်​ပေါင်း ၈၀ ​အ​တွင်း​မှာ ၁၈ ​ကြိမ် ​အာ​ဏာ​သိမ်း​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ၂၀၀၈ ​ခု​နှစ်​မှာ ​လက်​ရှိ ၀န်​ကြီး​ချုပ် ​ယင်း​လပ်​ရဲ့​အစ်​ကို ​အ​ရင် ၀န်​ကြီး​ချုပ် ​သက်​ဆင်​ရှင်​နာဝပ်​လက်​ထဲ​က ​အာ​ဏာ​ကို ​သိမ်း​ယူ​ခဲ့​ပါ​တယ်။
၂၀၁၀ ​ဧ​ပြီ​နဲ့ ​မေ​လ​တွေ​မှာ ​သက်​ဆင်​ကို ​ထောက်​ခံ​တဲ့ ​ရှပ်​နီဝတ်​တွေ​က ​ဘန်​ကောက်​မြို့​လယ်​မှာ ​ဆ​န္ဒ​ပြ​ခဲ့​ပြီးေ​ရွး​ကောက်​ပွဲ ​စော​စော​ကျင်း​ပ​ပေး​ဖို့ ​အဲ​ဒီ​အ​ချိန်​က ၀န်​ကြီး​ချုပ် ​အ​ဘီ​ဆစ်​ကို ​ဖိ​အား​ပေး​ခဲ့​ကြ​ပါ​တယ်။
​နောက်​ဆုံး​မှာ ​ဆ​န္ဒ​ပြ​ပွဲ​တွေ​ကို ​စစ်​တပ်​က ​လူ​စု​ခွဲ​ခဲ့​ပြီး ​လူ​ပေါင်း ၉၀ ​ကျော် ​သေ​ဆုံး​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ​သေ​ဆုံ​သူ ​အ​များ​စု​ဟာ ​မ​စ္စ​တာ ​သက်​ဆင်​ကို ​ထောက်​ခံ​သူ​တွေ ​ဖြစ်​ပါ​
ထိုင်းအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ကို လူသတ်မှုဖြင့် ရုံးထုတ်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် အဘိဆစ် ဝက်ဂျာဂျိဝကို သူ ဝန်ကြီးချုပ် တာဝန်ယူခဲ့စဉ်က ဆန္ဒပြသူတွေကို စစ်တပ်က ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူသတ်မှုနဲ့ ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က မြို့တော် ဘန်ကောက်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ရှင်နာဝပ်ကို ထောက်ခံတဲ့ လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက ပစ်ခတ် ဖြိုခွဲမှုအတွင်း လူ ၉၀ ကျော် သေဆုံး ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းက ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာ အဘိဆစ်ဟာ စစ်တပ်ကို အင်အား အလွန်အကျွံ သုံးဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မစ္စတာ အဘိဆစ်ကတော့ အခုလို စွပ်စွဲချက်တွေဟာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ မစ္စတာ အဘိဆစ်ဟာ သက်ဆင်ရဲ့ ညီမ ယင်လတ် အစိုးရကို ဖြုတ်ချရေး ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်နေပါတယ်။
ယနေ့ ည ၆ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ(မြန်မာစံတော်ချိန်)အထိ ကျင်းပမည့် ဆီးဂိမ်းစ်ဖွင့်ပွဲအား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်။
ဆီးဂိမ်းကို အိုးမဲသုတ်သူများ(သို့) မြန်မာပင်ကိုယ်စရိုက် အကျင့်ဆိုး
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အတွင်း ဆီးဂိမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲတွေထဲက တခုဖြစ်တဲ့ ဘောလုံး အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ စတင် ကျင်းပပါတယ်။ ကစားပွဲထဲမှာ လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ မြန်မာ ပရိသတ်တွေ အားပေးတဲ့ ပုံစံဟာ အရင့်အရင် နှစ်တွေကထက် တော်တော် တိုးတက်လာတာတွေ့ ရသလို ပရိသတ် တချို့ရဲ့ ပြုမူပုံတွေကတော့ တော်တော်ကြီး ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
တချို့ အကြိမ်တွေမှာလည်း ထိုင်းတွေက သူတို့ အသင်းကို အော်ဟစ်အားပေးနေချိန်မှာ ရာနဲ့ချီတဲ့ မြန်မာ ပရိသတ်တွေကထိုင်းတွေရဲ့ အသံတွေ ဖုံးလွှမ်းသွားအောင် ထိုင်းရဲ့ ပြိုင်ဘက်အသင်း အရှေ့တီမော နာမည်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ သံပြိုင် ဟစ်အော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနှစ် ဆီးဂိမ်းအတွက် မြန်မာ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်က အရင့်အရင် ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့မတူဘဲ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လုံခြုံရေး စနစ်တွေကိုတိုးချဆောင်ရွက်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဝင်ပေါက်တွေမှာ မီးခြစ်၊ ရေဗူးကနေ သွားကြားထိုးတံ အဆင့်လောက်အထိ ယူခွင့်မပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၄ ပေလောက်ရှည်တဲ့ ဦးအောင်ဇေယျ ပုံကြီးကိုတော့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ခိုးသွင်းလာတယ်တော့ မသိပါဘူး။
မြန်မာဟာ အိမ်ရှင် ဖြစ်နေပေမယ့် မြန်မာ ပရိသတ်တချို့က အိမ်ရှင် မပီသတဲ့ အပြုအမူ၊ မရင့်ကျက်တဲ့ အပြုအမူ၊ ရန်လိုတဲ့ အပြုအမူ၊ မယဉ်ကျေးတဲ့ အပြုအမူကို ပြသကြတာပါပဲ။ ဒီလို ပြုလုပ်သူတွေဟာ လက်တဆုပ်စာ ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မျက်နှာကိုရော၊ ဆီးဂိမ်းကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မျက်နှာကိုပါ အိုးမဲသုတ်၊ အရှက်ခွဲတဲ့ အပြုအမူ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲကို လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အထဲမှာ မြန်မာပြည်ကိုလာပြီး စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တဦးလည်းပါပါတယ်။ သူက မြန်မာပရိသတ်တချို့ ဒီလိုပြုမူတာကို ခွင့်လွှတ်ကြောင်း၊ တနေ့မှာတော့ ဒါကို ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ သိမြင်လာပြီးယဉ်ကျေးလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောသွားတာပါ။
အဲဒီနောက် ထိုင်းတွေကလည်း အော်လံနဲ့ “မြန်မာ … မြန်မာ” လို့ သံပြိုင် ဟစ်အော်ပြီး မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်းကို ပြောင်းလဲ အားပေးကြပါတယ်။ ထိုင်း-ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်ဘုရားကျောင်း ပြဿနာကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယားကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာဘက်က အားပေးတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သူတို့ကို ချက်ချင်းလက်ငင်း စော်ကားပြုမူထားတဲ့ မြန်မာတွေကို စိတ်မနာနိုင်ဘဲ ဆက်အားပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုရပါလိမ့်မယ်။
သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက် ထိုင်းတွေ မြန်မာဘက်က အားပေးကြာတာ ဝမ်းသာစရာ ဖြစ်ပေမယ့် ထိုင်းပရိသတ်အပေါ် စော်ကားနှောက်ယှက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပရိသတ်တချို့ရဲ့ အပြုအမူအတွက်လည်း အရှက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေကုက္ကိုမှာပြုလုပ်မဲ့ ကမ္ဘာ့အမ်းအနားဆုံး ကရင့်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ ကရင့်လက်နက်ကိုင်များ ပူးတွဲပြုလုပ်မဲ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားကို မြန်မာဘက်က လက်မခံနိုင်ကြောင်း ခိုင်လုံတဲ့သတင်းအရ ကြားသိရပါတယ်။
''အခုပြုလုပ်မဲ့ ပူးတွဲစစ်ရေးပြအခမ်းအနားက စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းပြယုဂ်ကို ဖေါ်ဆောင်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်သာမက တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ကရင်အမျိုးသားတွေ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြမှာပဲ။
ပူးတွဲစစ်ရေးပြအခမ်းအနားက ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကို သွားပြီးထိခိုက်မနေပါဘူး။ တခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်း လုပ်နေတာပဲ။ ကရင်တွေလုပ်မှ လက်မခံဘူးဆိုရင် ဒါ မရိုးသားတာပဲ။"
ဒီလို အဟန့်အတားတွေကို ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ အကောင်းဆုံးကျော်လွှားပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့....။
မလေးရှားကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သို့ လင်းဒါ၊ အချိုင်း၊ ဆိုဒ်အတာ လာရောက်ဖျော်ဖြေမည်
(၁၂)ကြိမ်မြောက်၊ မလေးရှားကရင်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို (01.01.2014)နေ့တွင် ခါတိုင်း ကျင်းပနေကျနေရာဖြစ်သော (Chinese Assembly Hall) တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင်လည်း ယဉ်ကျေးမှုနည်းပြဆရာ စောအဲသာဆို(ဒ်)က ကရင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အကပဒေသာများကို တမူထူးကဲစွာဖြင့် တင်ဆက်နိုင်ရန် အားထုတ်သင်ကြားခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
ထို့ပြင် ခေတ်ပေါ်တေးဂီတအစီအစဉ်အနေဖြင့် မလေးရှားအဆိုရှင်များအပြင် အဆိုတော် နော်လင်းဒါ(Naw Linda)၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လူငယ်တွေ အကြားရေပန်းစားနေသော သီချင်းများကို သီဆိုပေနေတဲ့ အရှေ့ပိုး အဆိုတော် Sur A Tar (ဆိုဒ်အ်ုတာ) ၊ ကရင့်နိုင်ငံရေးသီချင်း၊ ကရင့်အမျိုးသားလှုံ့ဆော်ရေးသီချင်းနှင့် အချစ်သီချင်းများကို အရှေ့ပိုး နှင့်စကော နှစ်ဘာသာ စွဲစွဲမြဲမြဲ သီဆို လေ့ရှိသော ကရင် Rock အဆိုတော် စောအချိုင်( A Chai) တို့လာရောက်ဖျော်ဖြေသွားမည်ဖြစ်သည်။
Sur A Tar
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသော ရပ်ဝေး ၊ ရပ်နီး ကရင်ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ယခု ကျရောက်မည့် (01.01.2014) နေ့ Chinese Assembly Hall တွင် ကျင်းပမည့် ကရင်နှစ်သစ်ကူး နေ့ကို မပျက်မကွက် တက်ရောက်အားပေးကြပါရန် MKO မိသားစုကိုယ်စား ကိုးဒီသွေးမှ ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်။
မန်ဒဲလားကို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြ
Wednesday, December 11, 2013တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလားကို အောက်မေ့တဲ့ အခမ်းအနားအတွင်း နိုင်ငံတကာက ခေါင်းဆောင် ပေါင်း အယောက်ပေါင်း ၁၀၀နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြသလို တောင်အာဖရိက နိုင်ငံသား သောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။Johannesburg မြို့ရှိ ဘောလုံးကွင်းကြီးမှာ နိုင်ငံတကာက သမ္မတတွေ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဘုရင်၊ ဘုရင်မတွေပါ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဘန်ကီမွန်းကလည်း နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား ကွယ်လွန်တာဟာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံအနေနဲ့ သူရဲကောင်း ဆုံးရှုံးရသလိုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအနေနဲ့ ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးသာမက ဆရာကောင်း၊ သူငယ်ချင်းကောင်း ဆုံးရှုံးရသလို ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားကလည်း မိန့်ခွန်းပြောသွားခဲ့ပြီး အဲဒီ မိန့်ခွန်းအတွင်း ဇင်ဘာဗွေ နိုင်ငံ သမ္မတလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်း စောင်းမြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘားရက်အိုဘားမားက နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလားရဲ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်မှုကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေ အသိအမှတ်ပြု ချီးကျူးကြပေမယ့် သူတို့နိုင်ငံတွင်း လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းသူတွေအပေါ် သီးမခံနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အများကြီးရှိတယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။စင်မြင့်ပေါ်မိန့်ခွန်းပြောဖို့ အသွားမှာပဲ သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားက ကျူးဘားနိုင်ငံခေါင်းဆောင် Raul Castro ကို ဝင်ရောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီး ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ရန်ဖက် နိုင်ငံနဲ့ မိတ်ဖက်ပြုလုပ်လိုကြောင်း ပြသရာရောက်တယ်လို့ သုံးသပ်နေကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ သမ္မတ Jacob Zuma မိန့်ခွန်းပြောကြားမယ့် အလှည့်မှာတော့ ပရိသတ်တွေက သူ့ကို ရှုတ်ချတဲ့ အသံတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် သမ္မတ မျက်နှာကို ဆယ်တဲ့အနေနဲ့ အခမ်းအနားစီစဉ်သူတွေက choir ကွိုင်ရာဓမ္မသီချင်းတွေ အချိန်စောဝင်ပြီး သီဆိုပေးခဲ့ရပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ တပတ်ကြာ ဝမ်းနည်းကြောင်း အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေ ပြုလုပ်ပြီး နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလားရဲ့ ရုပ်အလောင်းကိုလည်း အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေလှည့်လည်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ကြမှသာ သူ့ရဲ့ နေအိမ်မှာ နိုင်ငံတော် ဈာပနာအနေနဲ့ မြုပ်နှံ သင်္ဂြိုလ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး အိမ်ဖော်မလေးက ယေရှုခရစ်တော်ကိုသာ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသဖြင့် အိမ်ရှင် ဆော်ဒီမိသားစုက သူမ၏ ပါးစပ်နှင့် ဘယ်ဘက်မျက်ခမ်းများကို ပလတ်စတစ်ကြိုးနှင့် ချုပ်၍ အပြစ်ပေး 4:20 PM
စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့က အောက်ပါမူရင်းပို့စ့လင့်မှာ တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာ အိမ်ဖော်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်တာ၊ ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောကြားချက်တွေကြောင့် သူမအနေဖြင့် ထိုသို့ နောက်နောင် မည်သည့်အခါမှ မပြောနိုင်တော့အောင် သူ့အိမ်ရှင် ဆော်ဒီကြီးက သူမ၏ ပါးစပ်ပေါက်ကို ပလတ်စတစ်ကြိုးဖြင့် ပုံပါအတိုင်း ချုပ်ပိတ်စေရန် သူ့လူများကို စေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ထိုမျှမက သူမကို မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ပညာပေးနိုင်ရန်ဟူ၍ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုပါ ပလတ်စတစ်ကြိုးဖြင့် ချုပ်လုပ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဤပုံကို မူရင်း တင်ပြထားသူမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသော ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးငယ်အတွက် ဆုတောင်းပေးထားတာကိူ တွေ့ရပါတယ်။
VERY PAINFUL: BEWARE!!(DISTURBING CONTENT)
GIRL'S mouth and eye SEWN for professing her SALVATION!! This young lady had her mouth and left eye sewn with plastic threads for professing her salvation. The young Girl, who wasaservant in Sudi Arabia sought to serve God and professed that Jesus Christ is her personal savior. This did not go well with her master who ordered his men to sow her mouth so that she will neer say that again. Her left eye was sewn too, asawarning. This is the highest level of religious intolerance in the Arab world. As we end Eli's 10 days declard fasting,Let us pray for her to be healed and be saved from her pains.Link:
ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ ဘတ်ငွေ ၃၈ ဘီလီယံ ကုန်ကျမည် 4:13 PM
ဘန်ကောက် ဒီဇင်ဘာ ၁၀
ဖေဖေါ်ဝါ၇ီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းမမည့် ထိုင်းအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်
အစိုးရဘတ်ဂျက်မှ ဘတ်ငွေ ၃၈ ဘီလီယံ ကျခံသုံးစွဲသွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အတွင်းရေးမှုး Puchong Nutrawong က ပါတီများမှ
ဒီဇင်ဘာ ၂၃ မှ ၂၇ အတွင်း ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး
မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၂၈မှ ဇန်န၀ါရီ ၁ရက်နေ့အတွင်း ပြုလုပ်ရမည်ဟု ဆိုသည် ။
ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ရက်နေ့ ကြိုတင်မဲပေးရန်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်ဟု သိရသည် ။
၄၈ သန်းရှိကြောင်း Puchong Nutrawong က ပြောသည် ။
ပြင်းထန်လာသော အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လတ်က ထိုင်းလွတ်တော်ကို
ဖျက်သိမ်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်ကာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ။
သို့ရာတွင် အစိုးရသစ်ကို အာဏာလွဲအပ်ခြင်း မပြုနိုင်မီ အထိ ကြားဖြတ်အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲအဖြစ် ယင်လတ်
တာဝန်ယူမည့်အပေါ် ဆန္ဒပြလူထူက မကျေနပ်ဘဲ အစိုးရသစ်တစ်ရပ် မပေါ်ပေါက်မီအထိ
လူထုကောင်စီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းကာ ကြီးကြပ်စေရေး ၊ ပြည်ပတွင် နေထိုင်နေရသော ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်၏
အမျိုးအနွယ်များအားလုံးကို နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု မပြုစေရေးအတွက်
နောက်ထပ် ၃ ရက်ကြာ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်မှုများ ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားရန် ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် Suthep Thaugsuban က တိုက်တွန်း လှုံ့ဆောင်ထားသည်။
ထို့အတူ ယင်လပ်ကလည်း ယနေ့မနက်တွင် သူမအနေနှင့် ဆန္ဒပြသမားတို့၏ ယခုတောင်းဆိုချက်ကိုမူ မလိုက်လျောနိုင်တော့ဘဲ
ကြားဖြတ်အစိုးရ အကြီးအကဲအဖြစ် အစိုးရသစ်ကို အာဏာ လွဲအပ်နိုင်သည့်အချိန်အထိ တာဝန်ယူသွားမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည် ။
ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လုပ်ပေးမည့်အစီအစဉ် ထိုင်းဘုရင် အတည်ပြု
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲသစ် ကျင်းပမယ့် အစီအစဉ်ကို ဘုရင် ဘူမိဘော အဒူယာဒတ်က အတည်ပြု ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့မှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ကိ်ု ဘုရင်ကြီးက အတည်ပြုတဲ့အကြောင်းကို တော်ဝင် ဂေဇက် (Royal Gazette)သတင်းစာမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
၀န်ကြီးချုပ် ယင်းလပ်က ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့က တီဗွီ မိန့်ခွန်းတခုမှာ ထိုင်းပါလီမန်ကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပချိန်အထိ လက်ရှိ အစိုးရကပဲ ကြားဖြတ်အစိုးရအနေနဲ့ ဆက်လက်တာဝန်ယူထားမယ်လို့ ဒီနေ့ ထပ်မံပြောကြားပါတယ်။
အစိုးရ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေဟာ အစိုးရအိမ်တော်တ၀ိုက်မှာ ဒီနေ့မှာလည်း ဆက်လက် နေရာယူထားပါတယ်။
၀န်ကြီးချုပ် ယင်းလပ်နဲ့ သူ့အစ်ကိုရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ထိုင်းနိုင်ငံရေးက မဖယ်ရှားပြီးမချင်း ဆက်လက် ဆန္ဒပြနေမယ်လို့ ပြောကြားကြပါတယ်။
မနေ့ကတော့ ယင်းလပ်ရဲ့ရုံးရှိရာ အစိုးရအိမ်တော်မှာ ဆန္ဒပြသူ ၁ သိန်း ၆ သောင်း လောက်ဟာ စုဝေးခဲ့ကြတယ်လို့ ရဲတွေကဆိုပါတယ်။
“ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ဆူသက်ကတော့ နိုင်ငံအာဏာကို ထိုင်းပြည်သူတွေ ပြန်ယူခဲ့ပြီ။ ပြည်သူတွေက ၀န်ကြီးချုပ်အသစ်ကို ရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်” လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ဆူသက်ကတော့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ယင်းလပ် ယာယီဝန်ကြီးချုပ်ကနေ မထွက်မချင်း ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အစိုးရအိမ်တော်ရှေ့မှာ ညအိပ်ဆန္ဒပြတဲ့ လာရောက်ဆန္ဒပြသူတဦးက “ဆန္ဒပြသူတွေ ပိုမို ပူးပေါင်းပါဝင်လာရင် ကျနော်တို့ အောင်ပွဲရမှာပါ။ ကျနော်တို့ ဒီအဆင့်မှာတင် ရပ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဦးမှာပါ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ကျနော်က ဒီကို ပြန်မလာချင်တော့ပါဘူး။ ဒီတခါတော့ အပြတ်ဖြတ်မှာပါ။ သက်ဆင်ကို မောင်းထုတ်ခဲ့တုန်းကလည်း ပြတ်ပြီလို့ ထင်နေတာ။ ဒီတခေါက် ပြန်လာရပြန်တယ်။ ကျနော်တို့ လူထုတွေအတွက် မတရားပါဘူး” လို့ ဆန္ဒပြသူ နောက်တဦးက ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း နှစ်ပေါင်း ၈၀ ကာလ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု ၁၈ ကြိမ်အတွင်း ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ကို ဒီတကြိမ်တော့ စစ်တပ်ရဲ့ အကူအညီမပါဘဲ ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
#Aye #Chan #Mon မှ ပြန်လည်မျဝေပါသည်
Credit To:DVB TV News
From: Myint Htun
မုံရွာမြို့ရှိ ကေတီဗွီနှင့်မာဆက်မှ မိန်းကလေးအများအပြား ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသို့ ဝင်ရောက်နေလျက်ရှိကြာင်း သတင်းရရှိသည်။
"အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပါတီကလူတွေနဲ့ ဆိုင်ကိုလာကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဆိုင်အခြေအနေအရမို့ ဝင်ရောက်ကြရတာပါ။ တော်ကြာ ဆိုင်ကိုတစ်ခုခု လုပ်ပစ်မှာစိုးတယ်လေ။ သူတို့က ပါတီဝင်ကတ်ပြားတွေ ထုတ်ပေးပါတယ်" ဟု မုံရွာမြို့ရှိ ကေတီဗွီမန်နေဂျာတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
"ဟုတ်ပါတယ်။ အခုတစ်လော ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကို ကေတီဗွီဆိုင်က ကောင်မလေးတွေရဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်ကတ်ပြားတွေကို ပလတ်စတစ်လာလောင်းကြပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်ရေတွက်ကြည့်သလောက် နှစ်ရာနီးပါး လောင်းပေးခဲ့ရပြီးပြီ" ဟု မုံရွာမြို့ပေါ်တွင် ကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ထားသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။"မသိပါဘူး။ ဂျာကြီးက နင်တို့ဝင်လိုက်ဆိုလို့ ဓာတ်ပုံတွေပေး၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ပေးလိုက်တာ။ ညီမတို့ကတော့ ဘာခံယူချက်မှမရှိပါဘူး" ဟု ကေတီဗွီဆိုင်တစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်နေသော မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးမှ ပြောသည်။၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာသောကြောင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ အာဏာပိုင်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ယခုကဲ့သို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ပါတီဝင်အရေအတွက်များစေရန် လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ပါတီဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်စေရန် မဲဆွယ်စည်းရုံးနိုင်သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ စီးပွားရေးသမားများ၏ အကြောက်တရားကို အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖွယ်အသုံးချခြင်းမှ မဖြစ်သင့်ကြောင့် မုံရွာမြို့ရှိ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ဦးမှ ပြောကြားသည်။
The Voice Weekly ဒီဇင်ဘာ ၆နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် ဘုံသဘော တူညီချက်တစ်ခု ချမှတ်နိုင်ရန် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြုလုပ်မည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ညီလာခံ ကျင်းပရေးအတွက် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) က ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး ခေါ်ယူကျင်းပလျက် ရှိကြောင်း KNU ဘားအံ ဗဟိုဆက်ဆံရေးရုံး ဒုတိယတာဝန်ခံ ဦးစောမန်းသိန်းက ပြောကြားသည်။အဆိုပါ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ KNU ဝါးလေးစခန်းတွင် ပြုလုပ်လျက် ရှိပြီး ဗဟိုကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက် ဆွေးနွေးလျက် ရှိကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။အဆိုပါ အစည်းအဝေးက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ညီလာခံ ကျင်းပမည့် ရက်နှင့် နေရာကို ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း KNU နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ဆိုသည်။“အစည်းအဝေးက ခေါ်တာ နှစ်ရက် ရှိပြီ။ ဒီနေ့အထိပြီးမှာ မဟုတ်သေးဘူး။ အားလုံး ဆွေးနွေးပြီးသွားရင် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ထုတ်ပြန်မှာပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။KNU နယ်မြေအတွင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြုလုပ်မည့် လက်နက်ကိုင် ညီလာခံတွင် နိုဝင်ဘာလ အတွင်းက KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ပထမအကြိမ် ညီလာခံ၏ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကို ထပ်မံဆွေးနွေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ထံမှ သိရှိရသည်။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးရန်အတွက် နိုဝင်ဘာ ပထမပတ်အတွင်း KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာတွင် တိုင်းရင်းသား ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင်များက တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အပစ်ရပ်စဲရေး ဘုံသဘောညီချက်ကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၁၇ ဖွဲ့က လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည်။အဆိုပါ ရရှိလာသော ဘုံသဘော တူညီချက်များကို ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲကို ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြိုတွင် ပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာထားသည်။
Mahn Robert BaZan Letter to Gen. Saw Johnny-2 (2) by 9dblood
၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက အနုပညာရှင်တွေ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနဲ့ ရန်ကုန်မူးယစ်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့က ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေကို ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ဖွင့်ထုတ်ဖော်ပြခဲ့တာကြောင့် လူအများ စိတ်ဝင်တစား ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး “ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်း အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်တွေနဲ့ ကာယကံရှင်များရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံမှုတွေကို ထောက်ထားပြီး ဆက်လက်မဖော်ပြတော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်”တဲ့ မိုးဇေညိမ်း ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်ကို ဧရာဝတီသတင်းထောက် မေစစ်ပိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ “ဖော်ထုတ်တင်ပြနေခဲ့တာတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အာဏာပိုင်ဆိုတဲ့ အကာအကွယ်ကို ယူပြီး တရားဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ လူတစ်စုအကြောင်းကို အများပြည်သူတွေ တိတိကျကျ သိရှိနိုင်ဖို့”လို့ မိုးဇေညိမ်းက ဆိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ဒီဖိုင်တွေကို ကျနော်သိမ်းဆည်းထားခဲ့တာ နှစ်နဲ့ချီကြာခဲ့ပါပြီ။ အရင်တုန်းကတည်းက ဘာလို့ မထုတ်ဖော်ရသလဲ ဆိုတာကို ပြောရရင် ဖိုင်တွေ လက်ဝယ်ရှိစဉ်ကတည်းက ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းဌာနတွေကို ပေးပို့တင်ပြနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေရှိခဲ့ပေမယ့် စာရွက်စာတမ်းနှင့် ပတ်သက်နေသူများရဲ့ လုံခြုံရေးအနေအထား စိတ်မချရမှုကြောင့် သိမ်းဆည်းထားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဒီစာရွက်စာတမ်းနဲ့ ပတ်သက်နေသူတွေဟာ တစုံတရာ လုံခြုံမှုရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ထုတ်ဖော်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဒီလိုမျိုး ဖွင့်ချဖော်ထုတ်မှုတွေ ထပ်ပြီး တင်ဖို့ ရှိမလား။
ဖြေ။ ။ ကျနော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိုးဇေညိမ်း ဘယ်သူ၊ ဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်း ရေးနေ ပြောနေကြတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှား အမှန် တစုံတရာ မပြောလိုပါဘူး။ ကျနော် တချိန်က လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတခုနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော် ဆက်လက် လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပေမယ့် ကျနော် သဘောဆန္ဒအလျောက် လုပ်ငန်းခွင်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ကျနော်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှာ ရှိနေစဉ် ကာလအတွင်း ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းတွေမှာ ဖောက်ဖျက်ခဲ့ခြင်း၊ အရေးယူခံရတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်မို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအပါအ၀င် အထက်လူကြီးတွေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တစုံတရာ မကျေမနပ်ဖြစ်စရာတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဖြေ။ ။ မိုးဇေညိမ်း ဆိုတာက လူတယောက်ပါပဲ။ သို့ပေမယ့် ဒီလိုကိစ္စတွေ၊ အတွင်းရေးတွေကို ဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာဟာ ကျနော် တယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော့်မှာ အဖွဲတခုရှိပါတယ်။ မိုးဇေညိမ်း ဟာ အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အမည်နာမတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အချက်အလက်တွေကိုလည်း ကျနော်တို့အဖွဲ့က စုဆောင်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်လိုရခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ ကျနော် အသေးစိတ်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဖြေ။ ။ ရှိပါတယ်။ ဟိုအရင်က တင်ပြခဲ့တာတွေမှာရော ခု တင်ပြချက်တွေမှာပါ ကျနော့်ဆီ ဆက်သွယ်ပြီး ဆက်မဖော်ပြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလာသူတွေ ရှိပါတယ်။ (မိုးဇေညိမ်းက ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်း အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်တွေနဲ့ ကာယကံရှင်များရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံမှုတွေကို ထောက်ထားပြီး ဆက်လက်မဖော်ပြတော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်လို့ ဖေ့ဘွတ်အကောင့်က ကြေညာထားပါတယ်။)
ဖြေ။ ။ ဂျီမေလ်းကိုတော့ အတိုက်မခံရဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်တွေနဲ့ ပေ့ခ်ျ(Page) တွေ ကတော့ မကြာခဏ အတိုက်ခံရပါတယ်။ တလောက လက်ရှိသုံးနေတဲ့ အကောင့်ကို လုံးဝ ၀င်မရတော့လို့ ဖေ့စ်ဘုတ်ဆီကို Request လုပ်ပြီး ပြန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အရန်အဖြစ် ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ Moe Zay Nyein နာမည်နဲ့ Account တစ်ခုလည်း မနေ့ကပဲ ၀င်မရတော့ပါဘူး။ Report တွေကြောင့် ထင်ပါတယ်။နည်းပညာနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေသလို ကျနော့်ဆီကိုလည်း နည်းအမျိုးမျိုးသုံးပြီး ချဉ်းကပ်လာနေသူတွေ ရှိနေပါတယ်။
အရင်ကရော၊ အခုမှာပါ အာဏာကို အကာအကွယ်ယူပြီး ဥပဒေချိုးဖောက်တာတွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ဖို့ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖွဲ့မှာ ပါဝင်နေသူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအခြေအနေကို ထိပါးလာနိုင်တာမို့ သတိကြီးကြီးထား လုပ်ကိုင်နေရပါတယ်။ ။
သတင်းကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြသည်။ သတင်းထူးသတင်းဦးဆိုပါက ပို၍ပင် စိတ်ဝင်တစားရှိတတ်ကြသည်။ သတင်းဆိုသည်ကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မဖြစ်ပေါ်ဖူး သော အဖြစ်အပျက်ဟုဖွင့်ဆိုထားရာ ယင်းကဲ့သို့တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မဖြစ်ပျက်ဖူး၊ မပေါ်ပေါက်ဖူးသော သတင်းမျိုးဆိုပါက ပို၍ပို၍ပင် စိတ်ဝင်စားကြမည်ကမလွဲ။
လတ်တလောတွင် ထိုကဲ့သို့သတင်းထူးသတင်းဦးများစွာအနက် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ငလျင်တစ်ခုကဲ့သို့ လှုပ်ခတ်တုန်ခါသွားစေခဲ့သော သတင်းတစ်ခု
ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ တကယ်တော့ ထိုသတင်း၏အသွင်ပိုထူးခြားစေခဲ့သည်က လျှို့ဝှက်အပ်သောအရပ်မှ ပေါက်ကြားခဲ့သော သတင်းဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။
”ဟိုးအစောပိုင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း အစစ်ခံခဲ့ရဖူးတာပဲ။ အမှားက တော့ကင်းတဲ့သူ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒီဟာမကောင်းဘူးဆိုတာ သိလို့ လမ်းမှန်လျှောက် နေတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။ တရားဥပဒေကိစ္စကတော့ ကျွန်တော် သိပ်နားမလည်ဘူး။ ဒီဟာက စစ်ဆေးတဲ့ဟာ အပြင်ထွက်လာတယ်ဆိုတာက မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ အပြင် ထွက်လာတော့ ရှုပ်ကုန်တာပေါ့။ မဟုတ်ဘဲ အစွပ်စွဲခံရသူတွေက ငြင်းတာအကြောင်း မဟုတ်ပေမယ့် ဟုတ်နေတဲ့သူတွေ ငြင်းတာကတော့ ပြဿနာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လျှို့ဝှက်အပ်တဲ့ မပေါက်ကြားသင့်တဲ့အရာကတော့ အခုလိုပေါက်ကြားတာ လုံးဝ မသင့်လျော်ဘူး။ အမှားကို ဆက်လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ သတိပေးလိုက်တဲ့ သဘောတော့ ရှိနိုင်ပေမယ့် အရင်က မှားခဲ့တဲ့အမှားကိုသိပြီး အမှန်ကိုလျှောက်နေ တဲ့သူတွေ ခြေလှမ်းတုံ့ဆိုင်းသွားနိုင်တယ်”ဟု နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် လူမှုရေးကိစ္စများကို ကိုယ်အား စိတ်အား ထက်သန်စွာဆောင်ရွက်နေသူ ဦးကျော်သူက ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့နေသည့်အနုပညာရှင် များနှင့်
အဆိုပါ အနုပညာရှင်များ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည်ဆိုခြင်းနှင့် သုံးစွဲသူတို့၏ အမည်စာရင်းပါ ရဲစစ်ဆေးချက်၌ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ အဆိုတော်သုံးဦး အမည် စာရင်းတွင် ပါဝင်နေသည့် သားဖြစ်သူ၏ကိုယ်စားသာမက ရုပ်ရှင်လောကတစ်ခုလုံး ကိုယ်စား ပြောကြားသူ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးဇင်ဝိုင်းက ”ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် မင်းမော်ကွန်းဖခင်ဖြစ်တဲ့ ဇင်ဝိုင်းအနေထက် ရုပ်ရှင် လောကသားတစ်ဦးအနေနဲ့ လောကတစ်ခုလုံး ကိုယ်စားပြောချင်တယ်။ ကျွန်တော် တို့ သိသလောက် ဒီစစ်ဆေးချက်က ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်က ဖြစ်တယ်။ အဲဒီကာလတုန်းက ဒီနှစ်ယောက်တည်း ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနုပညာရှင် တော်တော်များ များကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာ ကျွန်တော့်သား အပါအဝင်ပါပဲ။ ခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီး စစ် ဆေးချက်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ချက်၊ စစ်ဆေးချက်တွေ ဆိုတာ ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရဖြစ်စေ၊ လူမှုရေးအရပဲဖြစ်စေ လျှို့ ဝှက်ထားရမယ့် ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒီကိစ္စပေါက်ကြားလာတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိပါ သလဲ
မေးချင်ပါတယ်။ ဒီလူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ် တက်လာတာနဲ့ သတင်းကို ပုဂ္ဂလိကစာနယ်ဇင်းတွေက ဖော်ပြတာရှိတယ်။ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးမှ ဖော်ပြတာ လား ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိပါ။ ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ ပြည့်တန်ဆာခန်း ထောင်ထားသူ ဇင်ဝိုင်းလို့ စာတစ်ကြောင်းကိုFacebook ပေါ်မှာ တက်လာရင် ပေါ်ပြူလာကတင်လာ မယ်ဆိုပါတော့ ကျွန်တော့်ကို အတည်ပြုမေးရပါမယ်။ အဲဒါက အတည်ပြုချက်မပါဘဲ ပါလာရင် လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ကျင့်ဝတ်အပိုင်း ပါသွားပြီ။ ဒါကိုတော့ ထားလိုက်ပါ။ ခေတ်စနစ်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲနေတဲ့ကာလမှာ အားလုံးက နေသားတကျ မှားယွင်းမှု ကို နားလည်ပါတယ်။ အခု အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နာမည်စာရင်းတွေက အနုပညာသည်တွေ မကပါဘူး။ မူးယစ်ဆေး ဝါးအန္တရာယ်ဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ တော်အတွက် ကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ လူငယ်တွေကြားမှာ သူတို့ ပတ် ဝန်းကျင်က စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဘဝတက်လမ်းအတွက် အကျိုးပြုစေတဲ့ အချက်များရှိနေတာထက် မူးယစ်ဆေးဝါး အရက်၊ ဘိန်းဖြူ၊ ဘိန်းမည်း၊ နံပါတ် ၄၊ ရာမ အစုံ အစုံ လက်လှမ်းတမီမှာ ရှိနေပါတယ်။ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ အများအမြင်မှာ ဒီကလေးတွေ ဒီလူစာရင်းတွေဟာ တရားခံလို့ မြင်ကြပေမယ့် ကျွန် တော် ကတော့ ခေတ်ဆိုးစနစ်ဆိုးရဲ့ သားကောင်လို့ပဲမြင်တယ်။ အနုပညာလောက ရယ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းမော်ကွန်းအတွက် ပြောခြင်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူငယ်ထုတွေကို အမြန်ဆုံးမူးယစ်ကျွန်ဘဝမှ အမြန်ဆုံး ကယ်တင်ပေးကြပါ။ နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇင်ဝိုင်းအနေနဲ့ တောင်းဆိုတာပါ။ မူးယစ် ရာဇာတွေက လူကုံထံရပ်ကွက်ထဲမှာ နန်းတော်တမျှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တိုက် ကြီးတွေနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကား ၁၄ စီး ၁၅ စီးနဲ့ တဝီးဝီးစီးနေကြတဲ့ မျက်လုံးမည်း မည်း အသား နီစပ်စပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘိန်းဖြူဘိန်းမည်းက အစရောင်းတာကို ပဲပြုတ်သည် သာမက ဆိုက်ကားသမားပါသိပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတာဝန် ရှိသူများက မသိကြ တာ၊ မတွေ့ ကြတာ၊ သတင်းမရကြတာကတော့ အလွန်အံ့သြဖို့ ကောင်းပါတယ်”
၂ဝဝ၈ခုနှစ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ ဖြန့်ဝေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးစစ် ဆေးခဲ့မှု ရဲမှတ်တမ်းတစ်ခု ပေါက်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအထဲတွင် လက်ရှိနာမည်ရ အနုပညာရှင်များစွာ ပါဝင်နေခြင်းက သတင်း၏တန်ဖိုးကို ပိုမြင့်မားစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အများပြည်သူ သိရန်ခဲယဉ်းသော အရေးယူစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းတစ်ခု ပေါက်ကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ လူထုစိတ်ဝင်စားမှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာသကဲ့သို့ ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုများလည်း ဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အဓိကထောက်ပြကြသည်က လူ့အခွင့် အရေး နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ။
ထိုသတင်းကို ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ထုတ်ဖော်တင်ခဲ့သူကတော့ ယခင် ကာလ ဥပဒေစီရင်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် အာဏာလွှမ်းခဲ့သည့်အတွက် အရေးယူမှုများ ပေါ့လျော့ဖုံးဖိခဲ့သည်ကို သိရှိရန်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် လတ်တ လောရပ်တည်နေကြသူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ခုတ်ရာတခြား ရှရာတခြား ဖြစ်ခဲ့ သည်ဟု ဝေဖန်မှု များက ပို၍ညံလာခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက် သရုပ်ဆောင်လူမင်းက ထိုသတင်းပေါ်ပေါက်ပြီး မရှေးမနှောင်းတွင်ပင် ၄င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှနေ၍ ငြင်းဆို ကန့်ကွက်ေ ကြာင်းတင်ခဲ့ပြီး စိုးမြတ်သူဇာကလည်း ၄င်း၏သဘောထားကို တင်ခဲ့သည်။ သို့အတွက် အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူဇာနှင့် ဒါရိုက်တာမိုက်တီးတို့၏ ဖေ့စ် ဘွတ်တွင် ဖော်ပြချ က်သဘောထားနှင့်တကွ အနုပညာလောကမှ သဘောထားများကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ဖြေရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။ အထူး လျှို့ဝှက်ဆိုတဲ့ ဖိုင်တွေတောင် ပေါက် ကြားကုန်မှတော့ လဝကက ကောက်ယူ မယ့်သန်းခေါင်စာရင်းထဲက အချက် ပေါင်း ၄၂ ချက် မပေါက်ကြား စေရပါ ဘူးလို့ အာမခံထားတာ ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ မယုံကြည်နိုင်တော့ပါဘူး။ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ လုံခြုံမှုအတွက် ပြည်သူ့ရဲ မှာ တာဝန်အရှိဆုံးပါ။ ဖိုင်လေး တစ်ဖိုင် နှစ်ဖိုင်တောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘဲနဲ့ အ မျိုးသားထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဖို့ လွှတ် တော်မှာ တင်နေတာမျိုးကတော့ ဖင် မနိုင်ဘဲ မန်ကျည်းဖျော်ရည် သောက် ချင်နေသ လိုပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရော၊ မင်းကိုနိုင်ရော၊ အစစ်ခံ ကြတာပဲ။ နောက်လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ကြမှာလဲ ပြောစရာဖြစ် လာတယ်။ လုပ်တဲ့လူကိုေ တာ့ မသိဘူး။ ဒါက ရဲဌာနက မပေါက်ကြားရင် ဘယ် ကပေါက်ကြားမှာလဲ။ ရဲမှာပဲ ရှိတာလေ။ စိုးမြတ်သူဇာဘက်က ကြည့်ရင်လည်း စိတ်ထိခိုက်တယ်။ သနားလည်း သ နား သွားတယ်။ သူတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ နဝရတ်တို့ အခြား လူတွေနဲ့လည်း သူတို့ခင်မင်မှုတွေအထိ အခိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကို မစဉ်းစား ကြဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးဆို တာရှိတယ် လေ”
လူမှုရေးအရပဲ ကြည့်ကြည့် ဥပဒေအရပဲကြည့်ကြည့် ဒါမျိုးက ဒီလို ဖေ့စ်ဘွတ်မတင်ဘဲ ဥပဒေအရပဲ ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စ …
ဦးအောင်စိုးဦး (တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ)
နောက်တစ်ချက်က ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ။ အဲ့ဒီအတွက် သက်ဆိုင် ရာက အရေးယူသင့်တဲ့ လူတွေလည်း ယူပြီးပြီလို့ ယူဆရတယ်။ ဒါခု ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ခုမှ ဖော်ပြခြင်း က နံပါတ် ၁ သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းတယ်။ နံပါတ် ၂ က ကာယကံရှင်တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်း တယ်။ နောက် ဖေ့စ်ဘွတ် မှာတင်တဲ့သူက တကယ်တမ်း ပြောရမယ်ဆို မတင်သင့် ဘူးပေါ့။ လူမှုရေးအရပဲ ကြည့်ကြည့် ဥပဒေအရပဲကြည့်ကြည့် ဒါမျိုးက ဒီလို ဖေ့စ်ဘွတ်မတင်ဘဲ ဥပဒေအရ ပဲဖြေရှင်း ရမယ့်ကိစ္စ၊ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက အဲ့ဒီလိုတင် တဲ့သူမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်။ တင်တဲ့ သူက အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ သူတွေက အဲ့ဒါကို Share မလုပ်ဖို့လို တယ်။ Share လုပ်တဲ့သူတွေကလည်း အားပေးတဲ့အထဲမှာ ပါသွားပြီ။ အတွင်း စည်းပေါက်လို့ဖြစ်တာ။ အတွင်းစည်း မပေါက်အောင် ထိန်းရမှာ အဲဒီဌာနရဲ့ တာဝန်ပဲ။”
”တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကြုံတွေ့နေကျ လှည့်ကွက် ဆန်းတစ်ခုပါပဲ။ ပြည်သူ့ဘက်တော် သားတွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သားတွေရဲ့ ကြား ဖြစ်လက်စ အမုန်း အတေးတစ်ခုကို အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များ ရဲ့ ပရိသတ်တွေပါ ရောထွေးပြီး ပဋိပက္ခ ကို ကြီးသထက်ကြီးအောင် ဇာတ်ရှိန် တင်လိုက်တာပါ။ ဝုန်းခနဲ ဒိုင်းခနဲ တစ် မဟုတ်ချင်း ပျံ့နှံ့ပေါက်ကွဲသွားလောက် အောင် ကတော့ ဗေထိဆိုတာနဲ့ ဝိုင်းအုံ တတ်ကြတဲ့ လူသားတို့အကြိုက်အပုပ်နံ့ မိုက်မိုက်လေးပါ အပေါ်ကရိုက်ပေးလိုက် မှတော့ ပြီးပြီပေါ့။ ပထမဦးဆုံး အနု ပညာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ၊ ပြီးတာနဲ့ ပရိသတ် ပြည်သူ နှစ်ခြမ်းကွဲ၊ ဒီကြားထဲမှာ မူးယစ်မှုလေး ပါ စနက်တံနှ စ်ချောင်းလောက် လက် တွေ့ရှို့လိုက်လို့ကတော့ မီဒီယာတွေ မှာလည်း သတင်းတွေပါ။ နောက်ဆုံး လည်းကျရော ဗိုလ်ချုပ်နှင့် သား အပေါင်းပါများနဲ့ပါ ၅ သင်းပတ်လည် တိုက်ပွဲတွေလည်း နွှဲကြရော လိုရင်းကို လည်းရောက်ရောပေါ့။ အောင်မြင်ချက် ကတော့ လန်ထွက်တယ်ဗျာ။ တစ်ချက် လေးခုတ်ရုံနဲ့တင် နုတ်နုတ်စဉ်းပြီးသား ဖြစ်တာ မတန်ဘူးလားဗျာ။ အဲ ဒါပေမဲ့ လို့ ခုချိန်ထိတိုင်မှာပဲ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်း ထွက် မကိုက်လောက်စရာက သူတို့ ကြို မတွက်မိတဲ့ တစ်ချက် အဲဒါက လူမြင်လို့ တောင် မတော်တာဗျာ။ လူမမာကို ကြိုး တုပ်ပြီး ရိုက်တာကိုး။ ဒီပွဲမှာ ကိုင်လှုပ် မယ့်သူက အနုပညာရှင်တွေလေ။ သူတို့ ခမျာ အော်နိုင်စရာကို အကြောင်းမှ မရှိတော့တဲ့ဟာ၊ ဥပမာပြောရင် ကျွန် တော်တို့ ကျားထိုးတဲ့အခါ တစ်ကောင် တည်း အကျန်သမားကို အကွက်ရွှေ့ စရာမရှိအောင် ပိတ်ထားမိတဲ့အဖြစ်ပေါ့။ အခုပွဲလည်း ခင်ဗျားဘယ်အနိုင်ရတော့ မလဲ၊ ဒါပေမဲ့ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အနုပညာရှင်တွေဘက်မှာ ကိုယ့်သတ် မှတ်ချက်နဲ့ ကိုယ် ဒဏ်ရာလေးတွေ ကိုယ်စီတော့ ရခဲ့ကြရပြီပေါ့ဗျာ။ အဲဒီ အတွက် နောင်ကြီး ကျေနပ်လိုက်ပါ တော့။ နောင်ကြီး မည်သူမည်ဝါဆိုသည် ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ မည်သည့် ရည် ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသည်ကိုလည်း ကျွန် တော်အမှန်မသိနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ပွင့် လင်းမြင်သာ အမှန်အတိုင်း သိစေလို သည့် စေတနာဆိုလျှင်လည်း မည်သူ့ အတွက် မည်သို့ အကျိုးရှိမည်၊ မည်မျှ အကျိုးရှိသည်၊ အလဲအထပ်လုပ်ရမည့် အရင်းအနှီး များနှင့် တန်၏မတန်၏၊ ထို အရင်းအနှီးတွေကရော အဲဒီအတိုင်း အတာလောက် နစ်နာရလောက်စရာ တစ်ဖက်သားအပေါ် ယုတ်မာ စော်ကား ပြစ်မှုမြောက်သူများလား၊ တရားဥပဒေ အရတောင် အမှုမမြောက်တော့တဲ့ ဒီ ကိစ္စ အတွက် သင်တစ်ယောက်တည်းရဲ့ ရန်လိုချက်က မဆိုးလွန်းပေဘူးလား သူ ငယ်ချင်း၊ စိတ်လျှော့ပါဘော်ဒါ၊ အဆင့် မြင့်မြင့်တွေးပြီး အမြင်ကျယ်ကျယ်ကြည့် ပါ၊ တို့တွေ လုပ်ရမှာ ဒီအလုပ်မှ မဟုတ် တာ၊ အသုံးချခံ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ကိုရင်။ အသေအချာ ထပ်စဉ်းစား၊ ကျုပ်တို့ပြည် သူတွေအကုန်လုံးလိုအပ်ချက် အလုံးစုံနဲ့ ရုန်းကန်နေရတုန်း မဟုတ်ပါလား။ နေ့ စဉ်နဲ့အမျှ စားဝတ်နေရေးအတွက် တောင် အခြိမ်းခြောက်ခံနေကြရသူတွေ ပဲလေ။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမို့ လွတ်လိမ့်မယ် ထင်လား၊ အပူကိုယ်စီပါပဲ ညီရယ်၊ အကြီးအသေးသာကွာပါလိမ့်မယ်၊ အေး အဲဒီမှာမှ အခု တို့အတွက်…ပိုပြီး နစ်နာ စရာ တစ်ချက်တိုး တာလေးက ညီတော် မကျေလည်တဲ့ အဲဒီအချိန် အဲဒီ အခါကတည်းကကိုပဲ တို့တွေ အားလုံးဟာ အာဏာပါးကွက်သား တွေရဲ့ ထောင်ချောက်တွင်းသို့ တစ် ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ဆွဲချခံခဲ့ရရင်း သူတို့ ကြိုက်သလို ပြုသမျှ နုရတော့မယ့် ပြန်ပေးအဆွဲ ခံထားရတဲ့ နယ်ရုပ် ကလေးတွေ ဖြစ်နေခဲ့ကြရတယ် ဆိုတာ ပါပဲ နောင်ကြီးရေ။
ဤမျှဆိုရင်တော့ စာရွက်ထဲပါသမျှ စာသားများကို သင် သဘောပေါက်ပေးပါတော့၊ ထိုမျှနှင့်ပင် မကျေ လည်သေးပါလျှင်လည်း အားလုံး ကိုယ်စား ကျွန်တော်ဖြေပေးပါဦး မည်၊ ဖြေပေးနိုင်ပါသည်၊ အကြောင်းကတော့ ဘာ နိုင်ငံတော်အလုပ်မှ မလုပ်တဲ့ ကျွန် တော်တစ်ယောက်တည်းသာ သေသေ ချာချာ အဖမ်းခံလိုက်ရလို့သာပါ။ အတွင်း ထဲအရောက် အကုန်ပေါက်ခဲ့ ပါတယ်။ ကျေနပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တ ကယ်တော့ အရှုပ်ထုပ်တွေအတွက် အလုပ်မရှုပ်ကြပါနဲ့၊ တကယ်လုပ်ရမှာ တွေက အုတ်တစ်ချပ်သဲ တစ်ပွင့်တောင် မလုံလောက်ရတဲ့အထဲ ကဲ
ကျွန်တော်တို့ထက် တတ်သိနားလည်တဲ့ ဆရာတွေ ပါနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက် သူတို့ဦးဆောင်မှုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့က ဖြေရှင်းသွားမှာပါ . . .
”ကျွန်တော်တို့ထက် စီနီယာကျတဲ့ လူလည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထက် တတ်သိနားလည်တဲ့ ဆရာတွေပါနေ တယ်ဆိုတဲ့အတွက် သူတို့ဦးဆောင်မှုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ က ဖြေရှင်းသွားမှာပါ။ သူတို့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းပဲ လုပ်ဆောင် သွားမယ်။ ဘာမှမတိုင်ပင်ရသေးတဲ့အ တွက် ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း သဘောထား မပြောသေး ပါဘူး။”
”ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လူ ကြီးတွေစီမံတဲ့အတိုင်းပဲ လိုက်လုပ်မှာ ပါ။ ကျွန်တော့်အထက်မှာ စီနီယာတွေ အများကြီးပဲ။ လူပဲ မှားမှာပဲလေ ဟုတ် တယ်မလား။ မှားခဲ့ တဲ့အချိန်တွေလည်း ရှိမှာပေါ့။ အဲဒါကို ပြန်လှန်ပြီး ဘာလုပ် မှာလဲ။ အဓိကက ကိုယ်ပဲ။ အခု ကျွန် တော်အေးဆေးပဲ လိမ်လိမ်မာမာပဲနေ တယ်။ အဓိကက ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပြဿနာမဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ ကျွန်တော်တော့ ဦးမ ဆောင်ဘူး။ ခေါင်းထဲလည်း ထည့်မထား ဘူး။ ဒီကိစ္စက ဒါကလူမှုရေး ဖောက်ပြန် တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအတွက် အေးဆေးပဲ။ ဒါက ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စမို့ ဘာမှ လုပ်လို့မရပါဘူး။ လူကြီးတွေ စီမံတဲ့အ တိုင်းပဲ လိုက်လုပ်မယ်။”
ကိုယ်ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်က အသိဆုံးပဲလေ။ အစ်မအနေနဲ့ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော
”ဒီပြဿနာကိစ္စက အဓိက ကိုယ် က အဓိကပဲ။ ကိုယ်ဟုတ်တယ် မဟုတ် ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်က အသိဆုံး ပဲလေ။ အစ်မအနေနဲ့ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော အစ်မ ဘာမှမထိခိုက်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ်မဟုတ်ရင် ပြီးတာပဲ လေ။ အစ်မဘာမှလည်း ပြောစရာမရှိ ဘူး။ ဒီလိုမျိုးတွေ တက်လာတာလည်း အစ်မ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမဝေ ဖန် ဘူး။ ဘယ်လိုမှမနေဘူး။ အဓိကကတော့ အစ်မကိုယ်တိုင်က အဓိကပဲလေ ဟုတ် တယ်မလား။”
Nobody Perfect ဆိုပေမယ့် Perfect ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာက ကျွန်မဟာ Perfect မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ . . .
”ပရိသတ်များရှင် ဒီရက်ပိုင်းအ တွင်း ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်သို့ ရောက်လာသည့် ကျွန်မနှင့် ပတ်သက် သော အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ် သက်ပြီး ကျွန်မ မိသားစု မိတ်ဆွေသူ ငယ်ချင်းများအပါအဝင် ကျွန်မကို သံ ယောဇဉ်ရှိကြတဲ့ ပရိသတ်များ အားလုံး စိတ်အနှောင့်အယှက်များစွာ ဖြစ်ရ သလို ကာယကံရှင် ကျွန်မကိုယ်တိုင် လည်း အတိုင်းအဆမရှိ စိတ်ထဲမှာ ထိခိုက်နာကျင်ရပါတယ်။
Moe Zay Nyein ကိုကျွန်မ မသိပါ။ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုလုပ် ရပ်ကို လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်း ကျွန်မ နားမလည်ပါ။ သူတင်ပြထားတဲ့ အ ကြောင်းအရာများကို မှန်ကန်ပါတယ်လို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှမထောက်ခံထား သလိုလုံးဝအမှန်လို့လည်းမယူဆသင့်ပါ။
Nobody Perfect ဆိုပေမယ့်Perfect ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်း အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာက ကျွန်မ ဟာ Perfect မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်မမှာ အား နည်းချက်၊ ချို့ယွင်းချက် တွေ အများကြီးရှိသလို အမှားမရှိ အပြစ်ကင်းတဲ့ လူမျိုးလည်း မဟုတ်ပါ ဘူး။ ကျွန်မ အသက် ၄၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ လက်ရှိ မိဘတွေနဲ့အတူတူနေပြီး ကျွန်မ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာနဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း မှာ ရိုးသားစွာ နေထိုင်ပြီး တင့်တယ် အောင် ရပ်တည်နေပါတယ်။ အခု ကိစ္စ မှာ ကျွန်မကို မရည်ရွယ်လည်း ကျွန်မ ဓာတ်ပုံနဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်အကြောင်းအရာ တွေကိုတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ အင်မတန် ခံရခက်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး နားလည်သည့် အသိ ဥာဏ်မျိုးမရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားပေမယ့် ဒီနိုင်ငံသူတစ် ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးကိုတော့ ကျွန် မစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ကျွန်မနဲ့ သက်ဆိုင်သော ကိစ္စ များကိုပဲ ကျွန်မစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကျွန်မအလုပ်ကို လေးလေးစားစား လုပ် ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အနိုင်မယူ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ အရှုံးမပေးWin Win Situation ကို လက်ခံကျင့်သုံးပါတယ်။ ကျွန်မ Life ကို Day by day ဖြတ် သန်း ပါတယ်။ ကျွန်မ ပျော်ပျော်နေတတ် ပေမယ့် ဘယ်တုန်းကမှ ပေါ့ပေါ့မနေခဲ့ ပါဘူး။
ကျွန်မ Life Perfect မဖြစ်ပေ မယ့် ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ ကျွန်မကြောင့် ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ထိခိုက် နစ်နာအောင်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးအောင် ဆိုး ရွားတဲ့ အပြစ်မျိုး၊ အမှားမျိုး မလုပ်ခဲ့ တဲ့အတွက် ဒီအသက်အရွယ်ထိ ဒီနေ ရာမှာ ကျွန်မရပ်တည်ခွင့်ရနေတာ လူ တိုင်းအမြင်ပါပဲ။ လိပ်ပြာသန့်တဲ့အတွက် ကျွန်မဘဝက မင်္ဂလာရှိပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေ ကို အကုန်ခံပြီး ဒီလိုပြန်ရှင်းပြရတာ ကျွန်မကိုချစ်တဲ့လေးစားကြတဲ့ ပရိသတ် တွေကို ကျွန်မတန်ဖိုးထား ထားလို့ပါ။ ကျွန်မအတွက် နံပါတ်တစ် ဦးစားပေး အရေးပါတဲ့ လူတွေထဲမှာ ပရိသတ်များ ပါပါတယ်။ ဆက်လျှောက်ဖို့ ကျန်နေ သေးတဲ့ခရီးမှာ ကျွန်မကို လက်တွဲထား မယ့် အဖော်ကောင်းမပါပေမယ့် မိတ် ဆွေကောင်းတွေကိုလက်တွဲပြီး ပရိသတ် ပေးတဲ့ ခွန်အားတွေနဲ့ ကျွန်မ ဆက် လျှောက် ချင်ပါတယ်။
MZN က ကွန်းမန့်တစ်ခုမှာ မကြီးစိုး စဆရလို့ သုံးနှုန်းထားပါတယ်။ စစ်သား သားသမီးဖြစ်လို့ ဒီအသုံးအနှုန်း ကို ကျွန်မနားလည်ပါတယ်။ ဦးMZN ရှင် (ဦးနဲ့ ပတ်သက် လို့ အနည်းငယ် သိထားတဲ့အတွက် ဦးတပ်ပြီး ခေါ်လိုက် တာပါ) ဦးပြောသလို အကြောင်းအရာ တွေ ချန်ထားခဲ့လို့ဆိုပြီး မရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအတွက် ကျွန်မ ကတော့ ဘယ်တော့မှ ကျေးဇူးတင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ ဒါပေမဲ့ ဦးပြောတဲ့ အသုံးနှုန်းအတိုင်းပြောရရင် ကျွန်မအ တွက် MZN စဆရမှာ မိတ်ဆွေကောင်း တွေ အများကြီး ထပ်ရလိုက်လို့ ဒီ့အတွက် ဦးကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ကျွန်မနိုင်ငံခြားမှာ နေရတဲ့အချိန် မှာ သိခဲ့တဲ့ ဥပဒေတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲ နေနေ၊ နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ဥပ ဒေမှာ တူညီတဲ့ ဥပဒေတစ်ခုတော့ရှိပါ တယ်။ အနုပညာ ရှင်များ(သို့) အောင် မြင်ထင်ရှား လူသိများသူတွေရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးဆိုင်ရာတွေကို (၁) ကာယကံရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက (၂) တရားဥပဒေ အရ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင် (သို့) တရား ရုံးမှ ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက (၃) လက်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ကျူးလွန် နေသူဟု ခိုင်လုံသောသတင်းအထောက် အထားမရှိပါက ဘယ်တော့မှ လူအများ မြင်သာတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြန့်ဝေနိုင်ခွင့် မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပြန့်နေသည့်အနုပညာရှင်များနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ရှင်းလင်းချက်တစ်ချိန်က အနုပညာရှင်အချို့အား မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာမှ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှုများသည် ဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းအရသော် လည်းေ ကာင်း၊ လူမှုရေးအရသော်လည်း ကောင်း ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ် ထားရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာနှင့် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ၊ ဂျာနယ်အချို့ တွင် တရားဝင်မှုများ သဖွယ် ကူးယူဖော်ပြနေခြင်းကို ရပ်တန့်ပေးရန် မေတ္တာ ရပ်ခံကြောင်း ယခုလ ၃ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။”ကျွန်တော်များ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်း ထားသော (NGO) အသင်း အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။တစ်ချိန်က အနုပညာရှင်အချို့အား မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာမှ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ထိုသို့ဆွေးနွေးတွေ့ ဆုံမှုသည် ဌာန ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရသော်လည်းကောင်း၊ လူမှုရေးအရသော်လည်း ကောင်းထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။သို့သော် ယင်းလျှို့ဝှက်ထွက်ဆိုချက်သည် ယခုအခါ အွန်လိုင်းကွန်ရက် စာမျက်နှာ (Facebook)ပေါ်တွင် ရောက်ရှိရုံမျှမက ယင်းကို ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာ နှင့် ဂျာနယ် အချို့တွင်ပါ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်သဖွယ် ကူးယူဖော်ပြလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ယင်းအတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမရှိသော အနုပညာရှင်များ၊ ပတ်သက်မှု ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် လမ်းမှန်သို့လျှောက် လှမ်းရန် ကြိုးစားနေကြသော အနုပညာရှင်များနှင့်တကွ မိသားစုများပါ ဂုဏ် သိက္ခာညှိုးနွမ်းထိခိုက်ကြ ရသည်ကို စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့ရှိရပါသည်။သို့ပါ၍ ကျွန်တော်များ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအနေဖြင့် အထက် ပါလုပ်ရပ်များအား ရပ်တန့်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။( မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး)မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်အနုပညာ ရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များဖြင့် ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရမဟုတ်သည့် အသင်း အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သည်။
Aye Chan Mon Read More
Mahn Robert BaZan Letter to Gen. Saw Johnny-2 (2) by 9dblood ပူးတွဲစစ်ရေးပြ အခမ်းအနားကို ဘာကြောင့်လုပ်ခွင့်မပေးတာလဲ။
ထိုင်းအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ကို လူသတ်မှုဖြင့် ရုံးထုတ...
SEA GAMES 2013 OPENING CEREMONY (LIVE)ယနေ့ ည ၆ နာရ...
ဆီးဂိမ်းကို အိုးမဲသုတ်သူများ(သို့) မြန်မာပင်ကိုယ်စ...
ပူးတွဲစစ်ရေးပြ အခမ်းအနားကို ဘာကြောင့်လုပ်ခွင့်မပေး...
မလေးရှားကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သို့ လင်းဒါ၊ အချိုင်း...
မန်ဒဲလားကို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ခြဲ့...
ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ ဘတ်ငွေ ၃၈ ဘီလီယံ ကုန်ကျမည်
ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လုပ်ပေးမည့်အစီအစဉ် ထိုင်းဘုရင် အတ...